पानी मानव जीवनको लागि नभइ नहुने अति आवश्यक तत्व हो। मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा करीब ६० प्रतिशत हुन्छ। पानीलाई उमालेर खानु राम्रो मानिन्छ तर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यसलाई धेरै उमाल्नु हानिकारक छ। यसकारण पानीलाई धेरै उमाले के के हानी पुर्‍याउँछ?
Up Next कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् ४ सजिला उपचार
पेनकिलर प्रगोग गर्नुहुन्छ भने साबधान रहनुहोस, फाइदा भन्दा बढी गर्छ हानी